အီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ် - အီလက်ထရွန်းနစ်. အီလက်ထရွန်းနစ်စာအု
အီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ် - အီလက်ထရွန်းနစ်. အီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ် ကို အီးဘွတ်ခ် ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပြီး စာသားများ၊ ရုပ်ပုံများပါဝင်ကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ဖြန့်ချိသော ..
အီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ် ကို အီးဘွတ်ခ် ဟုလည်း ခေါ်ဆိုကြပြီး စာသားများ၊ ရုပ်ပုံများပါဝင်ကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ်ဖြင့် ဖြန့်ချိသော စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်သည်။ ယင်းကို ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် အခြားသော အီလက်ထရွန်းနစ် ကိရိယာများတွင် ဖတ်ရှုနိုင်အောင် ပြုလုပ်ထားသည်။ အီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ်ကို "ပုံနှိပ်စာအုပ်၏ အီလက်ထရွန်းနစ် ပုံစံ"ဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားသော်လည်း အချို့သော အီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ်စာအုပ်များသည် ပုံနှိပ်စာအုပ်အနေဖြင့် ရှိမနေချေ။ အီလက်ထရွန်းနစ်စာအုပ်ကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန်အတွက် သီးသန့် ဖန်တီးထားသော ကိရိယာများတွင် ဖတ်ရှုနိုင်ရုံသာမက ကြည့်ရှုထိန်းချုပ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်ပါဝင်သည့် စားပွဲတင် ကွန်ပျူတာများ၊ တစ်ကိုယ်ရေသုံး ကွန်ပျူတာများ၊ တက်ဘလက်များနှင့် စမတ်ဖုန်းများပေါ်တွင်လည်း ဖတ်ရှုနိုင်သည်။
စ ပ ရ လ ပ ငန မ စ ပ ပ င တည ထ င ထ သ ဂ ပန က မ ပဏ က တစ ခ ဖ စ သည အ လက ထ ရ န နစ ထ တ က န မ တ ဗ ဂ မ စက မ ရ ခ သ တ တ စသည ဖ ဖ ရ လ ပ ငန မ န င
တက ဘ လက က န ပ တ အတ က လ က က မ သ အသ ပ မ မ တင ဆက နည မ က က ည ရ ခ င ဗ ဒ ယ တ ဆ ခ င အ လက ထ ရ န နစ - စ အ ပ မ ဖတ ခ င
အ လက ထ ရ နစ ပစ စည တ င သည ဒစ ဂ စ တယ ပ စ ရ က သည မဟ တ က င သ ထ သင သည အခ စ က ည တ က မ တ င က င တ ယ ဖတ ရ ရသည စ အ ပ မ ရ သလ အ
ဇ ဝစ မ အင ပည ဇ ဝ အ လက ထ ရ န နစ ပည န က ဘ လ ဦ မည နည သက ရ င အခ အ လက ထ ရ န နစ ဇ ဝဗ ဒန င ကင ဆ ရ ဂ
အတ က က TI ဟ ခ သ အမည သည Valve က ပ ရ ရ င မ ဦ စ က င ပသ အ လက ထ ရ နစ အ ကစ တစ ခ ဖ စ သည ဒ တ ခ န ပ ယ ရ စ ပ င ပ တစ ခ က က ယ စ ပ ခ င ဖ စ သည
အဟ န စသည တ က လ လ သ ပည transport phenomena ဇ ဝဗ ဒ မက ကင နစ အ လက ထ ရ နစ တ က ပ င စပ လ လ သ ပည ရပ biomechatronics ဇ ဝန န နည ပည န င
ဒ သတ င မ သည ကမ ဘ လ အန အတ င အတ အထ က ယ ပ န စ သ ယ တန ထ သ အ လက ထ ရ န နစ အခ က အလက တည ဆ က မ န င အမ င ဆ င ရ က န ယက နည ပည မ ဖ င ခ တ ဆက ထ သည
က ယ ရ တ တစ ဦ ဖ စ သ ဗ လ မ အ တ ဂ န ရ က ဟစ တလ သည မ မ က ယ က မ မ သ နတ န င ပစ အဆ စ ရင က င က င ယ တ အ ဗ ဗ ရ န ကမ အဆ ပ သ က အဆ စ ရင ခ က င
အတ တက ဆ ဖ စ သ က န ထ တ လ ပ ငန အခ ဖ စ သည မ တ က အ လက ထ ရ န နစ စက က ရ ယ မ စတ လ န င သ မဟ တ သ သတ တ မ သင ဘ မ ဓ တ ပစ စည မ
ကန သတ ထ သည ယ အ အ အ ဂ ဗ မင စနစ မ ယ အ အ ဖက ဒရယ အစ ရအ အ လက ထ ရ န နစ စနစ ဖ င တ ခ ထ ခ င ဖ စ သည ခ န စ ဖ ဖ ဝ ရ လ ရက တ င
မ အရ အတ က ဖ င တ က ရ က တင မ က ခ င မဟ တ ပ ပ ည နယ အလ က အခ က ခ ဝ ထ သ အ လက ထ ရ ရယ က လ ပ စနစ ဖ င တင မ က ခ င ဖ စ သည တရ ရ ခ ပ က အမ ရ ကန
ခ န စ တ င ဆက ဆ န ယန အင ပ င ယ မ ပ ရ န ပင လယ က တဝ က ရ ဒ သမ အ ထ န ခ ပ န င ခ သည က တ သည ဆက ဆ နစ လ မ တ က သန ရ င ဝယ ရ လ ပ ငန တ င
အင ဂလ ပ န င ပ င သစ တပ မ သည ကမ မ ရ န နယ က သ မ ပ က ခ ဂ မန အန က တ င အ ဖရ က နယ မ လည မဟ မ တ တ လက ထ သ က ရ က ခ လ သည ယင သ ဖ င
ဘ လ ယ ခန မ ရ သည အဓ က ပ က န မ မ ဆ မ က န ဒတ တ မ န င အ လက ထ ရ န နစ ပစ စည မ သယ ယ ပ ဆ င ရ ဆ င ရ စက ယန တရ မ အဝတ အထည မ
စ န ဂ န က လ ပ က စတင တက ရ က သည သ မဟ တ အစ ပ င တ င ဝ ဇ ဇ ဘ ရသည တ င ဟင နရ အဌမ ဘ ရင မင မ တ တည ထ င သ က န ဘရစ ထ ရ န တ က လ ပ တ င
ဒ က တ ဆ ပ ခ င ပ နစ ပက ဒ င သည က လသမဂ ဂ က န သ ယ ရ န င ဖ ဖ ရ ည လ ခ အဖ တ င လက ရ အထ ထ အတ င ရ မ ခ ပ အဖ စ ဆ င ရ က လ က ရ သည
ရ န ခ သည အစ ပ င လ တ မ က ရ လ ပ ရ မ မ ဖ စ သ ထ ရ န ည အစ က မ လ ပ ရ မ န င လ ဒ ထ ရ တ လ ပ ရ မ မ မ တဒင ဂသ လ င အ င မ င ခ သ လည
အက င တစ ရပ အဖ စ ယ ဆက သည အန မ လ ပ စစ ဓ တ အ ပ စက ရ မ န င အ လက ထ ရ န နစ က ရ ယ မ မ လည ဖ ထ က ရ င ခ ည မ အနည န င အမ ထ က လ က ရ ရ
အရ ဘက တ င တည ရ သည ဆ ရ က က လ ပ ငန စက က ရ ယ မ ထ တ လ ပ ခ င လ ပ ငန အ လက ထ ရ န နစ ပစ စည မ ထ တ လ ပ ခ င လ ပ ငန န င ဇ ဝနည ပည ဆ င ရ မ က ထ တ လ ပ သည
ရ သဖ င ကမ ဘ ပ တ င စတ တ ထမ က လ ဦ ရ အမ ဆ န င င ဖ စ ပ အ စ ထ ရ န ရ န န င င န င မ တ စလင ဘ သ ဝင အမ စ ရ သ န င င မ တ င လ ဦ ရ အမ ဆ
ယဉ က မ အမ အန စ မ န င ဂ အမ အန စ မ စ ဆ င ထ ရ ရ စ က ည တ က တစ ခ ဖ စ သည စ အ ပ ပ င င သန က ခန စ ဆ င ထ ရ ပ ဂ ဗက ရမ ရ ဂ ရ ဆလင ဟ ဘရ တက ကသ လ
စ တ ဝင စ ခ သည ပ က ဆ သ သ ဇ တ လမ မ စ အ ပ the Book of Lost Tales မ စတင င သ သန ဂန ထ ဝင စ ပ မ စဉ ဆက စ မ မ တ င ထပ ခ တလ ပ န လည အသ ခ ခ သည
က င ပသည ခ န စ တ င ပ လ ပ ခ သ The International TI5 သည အ လက ထ ရ န နစ အ ကစ မ အမ ဆ ဆ က အမ င ဆ အဖ စ မ တ တမ ဝင ခ က စ စ ပ င
ထ သ တ မ ဒ ဗစ ကင မ ရ န ဝ လ ယန ဟ ဂ William Hague မ က ကယ ဂ ဗ Michael Gove ဂ ရမ ဟန တ Jeremy Hunt နစ ဘ လ စ Nick Boles တ ထ မ တစ ဦ ဖ စ သည
လက ခ က င ပမည မ မ ဖ စ က ပ သည ဇင နစ ခ လ ဆ ရ က ခရ ဗင ည ဇဗက ဇဒ တ မ လ ငယ အသင မ ဂဇ ပ ရ န မ ကလ မ အ ကစ န အထ မ အမ တ ခ န ပ ယ အသင မ
ယ က ဆယ လ လ မ ဘ င ဖ န က န ရက က ဗ ဒ ဖ န က လ တ တင ရက အ သ ယ ပ ယ ရ ဖ လက ရ ရဟ ဒ အနက ခန က ဆ ဒန မ တဆင အစ စရ သ
DSM, AKZO ရ န သန စင မ လ ပ ငန မ တ င Royal Dutch Shell အ လက ထ ရ နစ ပစ စည လ ပ ငန တ င Philips ASML ဂ ဟ တ ဖ င သ လ မ ည န ပ သ က မ ပဏ အဖ စ
ဖ ဖ တည ဆ က မ မ တ - ဝ က ဝ က မ ဒ ယ ပရ ဂ က အ လ အတ က ဆက သ ယ ရ ဝ က စ အ ပ အခမ က င သ စ အ ပ န င လက စ စ အ ပ မ ဝ က ဒ တ အခမ အသ ပည ဗဟ
ရ န န ပ ည အင တ နက သ စ သ မ ကပ န မည ဆ န က က တ အစ ရရ အ လက ထ ရ န နစ ဥပဒ က စက ကန မလပ က က ရ န န က ရပ တယ ထ သ သ ပ တ ဆ ထ မ န
ခ က သည ဥပမ အ ဖ င လ န ပ န ရ သ မ က လ န ပ န သ Hlangprang tu ဟ လည က င က လ အ မ ရ သ မ က က လ အ မ သ Kal Im tuu ဟ လည က င